Cumar Maxamuud Faarax (Dholawaa),“Jubbooyinka & Gedo dad baa leh, shirkana laguma ahan”(Maqaal). | Sahan radio
Ilaa intii laga saaray degaanada Jubbooyinka iyo Gedo kooxdii argagixisada ahayd ee Als-shabaab waxaa batay hadal haynta degaanadaas waxaadna moodaa in dad u arkeen Jubbooyinka iyo Gedo qaniima laga dhaxlay Al-shabaab dadkana ka dhexaysa oo mudan in la qaybsado.
Waxaa la yaab leh muddo dheer oo Al-shabaab xoog ku haysatey magaalada Kismaayo iyo degaanada ku meegaaran xukuumada Xamar ka jirtay oo uu garwadeenka ka ahaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed cid wax iska weydiisay ma jirin. Cid ay dhibaato ku haysay xaallada ay ku sugan yihiin dadka degaanadaas ku dhaqana la isma weydiin. Juhdi lagu bixiyey sidii looga saara lahaa Al-shabaabna ma dhicin, marka laga saaro ciidan lagu tababariyey Kenya oo marar badan Dawladu saluug ka muujisay.
Waxaa iyaduna xusid mudan, Dawlada dhibaato weyn ayay ku haysay in Al-shabaab ay qabsadaan magaalada Beledweyn ilaa saddex jeer ayaana laga saaray Beledweyn kooxda Al-shabaab. Dhiig badan iyo dhaqaale badan ayaana loo huray xoraynta iyo difaaca dadka halkaas ku dhaqan, xaq bayna u lahaayeen difaacaas sida magaala kastaa xaq ugu lahayd.
Sida siyaasiyiin badan oo Somali ahi aaminsan yihiin, saddex sababood ayaa jiray oo mar walba ogolaanayey in aanay Al-Shabaab gacanta ku sii hayn Beledweyn. Sababahaas ayaa kala ahaa: Al-shabaabta qabsanaysay Beledwayn ma ahayn Al-shabaabta asalka ah ee dagaalkoodu xigmadaysan yahay balse waxay ahaayeen kuwa laablakac iyo habow ugu soo biiray Al-Shabaab.
Dadka Al-shabaab taladoodu ka go’daana uma arkayn in doorka kooxdaasi dhaafo gelida dagaalka iyo hurida nafta. Qodobka labaad ayaa ahaa Ethiopia oo iyagu mar walba u arkayey joogitaanka Al-shabaab meel aan wax badan ka durugsanayn xuduudooda inay halis ku tahay deganaanshaha iyo xasiloonida Ethiopia sidaas darteedna diyaar u ahaa inay qaybta ugu weyn ka qaataan xoraynta Beledweyn. Qodobka saddexaad baa ahaa qayladhaanta ka imanaysay Beleweyn oo toos ugu soo dhacaysay madaxtooyada oo aad moodo inay aad ugu dhega furnayd.
Si kasta ha ahaatee, Dawlada uu horjoogaha ka yahay Hassan Sheikh Mohamud ayaa u aragtay ka xoraynta Jubbooyinka Al-shabaab inay ahayd mid lagu degdegay aana muhiim ahayn maadama si kale oo loo maarayn karay. Sida ka muuqata siyaasada Dawlada ee ku wajahnayd haysashada Al-shabaab ee Jubbooyinka iyo shabeelada hoose istaraatiijiya ahaan waxay u egtahay inay ugu muuqatay inay masmuux ahayd, malaha, markay ku eegeen xaalka diirada qabiilka.
Waxaana aragtidaas taageeraya qayla dhaanta rag magac odayaal sheeganaya oo degan xamar oo si aan xeerin lahayn uga hadlaya Jubbooyinka iyo Gedo cidda maamulkeeda iyo gacan ku haynteeda xaqa u leh. Waxaadna moodaa in odayaasha qaarkood aanay weli ku baraarugin wixii dhib laga soo maray iyo wixii laga dheefay fekerkii 1991kii ee ka guurida “qaran” oo si buuxda loogu guuray aragti “qabiil”.
Soomaaliya waxaa iska leh Soomaali; laakiin degaan walba, buur walba iyo banaan walba, dooxa walba iyo deex walba, tog walba iyo taag walba, guri walba iyo geed walba waxaa degan reer gaara oo lagu yaqaan, meel shirka lagu yahayna ma jirto marka laga hadlayo cidda maamulkeeda iyo maaraynteeda looga fadhiyo. 16ka degmo oo Xamar, marka saaro Shangaani oo ah xaafada ugu yar xamar, waxaa maamula maanta hal reer – lana soco waa magaala madaxdii ummadda Soomaaliyeed, dawladuna dhib uma arag!!!
Si kasta ha ahaatee, waa masuuliyada Dawlada inay garato inay waajib tahay wadanka inay ku daadihiso si nabad iyo cadaalad ku salaysan. Somalia wixii ka dhacay 22kii sano ee u dambeeyey waxaa dhalay cadaalad xuma dhacday 21kii sano ee ka horrayey. Haddii la waayo cadaalada iyo ka garaabida dareenka iyo rabitaanka dadka, waxaa imanaya hab kale oo dadku cadaalada ku raadsadaan. Doorka hadda dawladu ka qaadanayso Jubbooyinka iyo Gedo, iyo hanaanka ay rabto inay u marto maamul u samaynteeda maaha mid keenaya nabad iyo xasilooni, waana mid aan waafaqsanayn distuurkii lagu doortay Dawlada nafteeda, natiijada ka iman doonta talaxumadaasna waxay keeni doontaa in Soomaalia gadaal ugu noqoto dhabadii la qaaday 1991kii.